Saacadaha ugu horreeya ee Android Wear 2.0 waxay la imaan doonaan Digital Crown | Wararka IPhone
Saacadaha ugu horreeya ee Android Wear 2.0 waxay ka amaahan doonaan Digital Crown-ka Apple Watch
Markay kuwii ka socday Cupertino soo bandhigeen Apple Watch, waxay sidoo kale soo bandhigeen (ugu yaraan) dhowr waxyaalood oo xiiso leh. Dhexdooda waxaa jiray mid ay aad u jeclaayeen oo tartanku uu ku dhammaaday in lagu daro bir laalaab ah oo hadda la doonayo inay ku hirgeliyaan si isku mid ah ugu horeysay ee loo yaqaan 'Android Wear 2.0' taasi suuqa ayey ku dhaceysaa. Waxaan ka hadlaynaa Digital Crown.
Laakiin qoraalkani ma aha mid ku saabsan Apple Watch ama Digital Crown-kiisa, waxaan hore u soo sheegnay inuu ku jiri doono aaladaha aan halkaan kaga hadli doonno, laakiin waa wixii ku saabsan saacadaha ugu horreeya ee Android Wear 2.0 ee suuqa ku dhici doona: Ciyaaraha LG Watch y Nooca LG Watch. Labadan saacadood ee casriga ahi waxay suuqa u gaari doonaan sidii shirkadda Nexus sameysay ka hor inta aan la bilaabin Pixel, taasi waa, waxay noqon doonaan saacado ay LG abuuri doonto laakiin loogu talagalay Google, dhammaan haddii macluumaadka ayaa daabacay Evan Blass, aka evleaks, ee Venturebeat waa la kulmay.
LG Watch Sport iyo LG Watch Style, waa saacadihii ugu horreeyay ee adeegsada Android Wear 2.0
Sida laga soo xigtay evleaks, Google iyo LG ayaa labada saacadood ku soo bandhigi doona munaasabad rasmi ah oo loo yaqaan 'Android Wear' oo dhici doonta Febraayo 9 waxaana la iibin doonaa maalin kadib. Mar dambe, labada saacadoodba waxay bilaabi doonaan inay ku sii fidaan suuqyo kale inta lagu jiro bilaha Febraayo iyo Maarso, taas oo ay uga faa'iideysan doonaan dhiirrigelinta Shirweynaha Caalamiga ee Moobaylka (MWC) oo ka bilaaban doona 27-ka Febraayo magaalada Barcelona.
Labada saacadoodba way wareegayaan Waxayna yeelan doonaan shaashado OLED ah, laakiin waxay u muuqataa in labada midkood uu aad uga fiicnaan doono kan kale: Daawashada Ciyaaraha. Nooca isboortiga ee labada Android Wear 2.0 ee LG iyo Google ay bilaabi doonaan waxay lahaan doonaan shaashad ballaaran oo leh xallin sare, RAM badan (768MB vs 512MB), keyd badan, batteri ku dhowaad laba jibbaar u eg, GPS, NFC iyo taageero ku xirnaanta shabakadaha mobilada (3G iyo LTE). Intaa waxaa dheer, labaduba waxay wadaagaan isku xirnaanta Bluetooth iyo Wi-Fi.
Labada saacadoodba way awoodi doonaan inay xidhaan Kaaliyaha Google wayna u adkaysan doonaan biyaha iyo siigada, iyagoo hela qaabka isboortiga oo ilaalin weyn u leh macnahan (IP68 ee Sport iyo IP67 ee Style). Intaa waxaa dheer, ka Model isboorti sidoo kale wuxuu yeelan doonaa kormeeraha heerka garaaca wadnahaMarka dood ma jiri doonto aniga iyo haddii aan rabo inaan iibsado saacadda Android Wear 2.0, dookhaygu wuxuu noqonayaa "Nexus" smartwatch oo i siiya dhammaan fursadaha.
LG Watch Sport wuxuu ahaan doonaa 14.2mm qaro weyn waxaana lagu heli doonaa midabada titanium iyo buluug mugdi ah, halka 10.8mm LG Watch Style laga heli doono titanium, qalin iyo dahab kor u kacay, laakiin wuxuu yeelan doonaa xarigyo is-beddeli kara oo u oggolaanaya inay si wanaagsan u muuqdaan dhar kasta oo aan xirano.
Maxaad u maleyneysaa in saacadaha ugu horreeya ee Android Wear 2.0 ee suuqa yaala?
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Android » Saacadaha ugu horreeya ee Android Wear 2.0 waxay ka amaahan doonaan Digital Crown-ka Apple Watch
Kaniisada Frederick dijo
Waad salaaman tihiin, qoraalka waa mid aad u xiiso badan.
Maanta waxaan heystaa taxanaha Apple Watch 1, oo si daacadnimo ah uma arko wax macno badan leh marka laga reebo macluumaadka ay ka xumaadeen Apple Health + ogeysiisyada ... laakiin uma isticmaalo si aan uga jawaabo gabi ahaanba wax ...
Marka, su'aashu waxay tahay… oo leh Android Wear 2.0, miyaan lahaan doonaa waxqabad la mid ah kan aan maanta haysto ee Taxanaha 1? Iswaafajinta Adroid Wear ayaa wanaagsan? si sax ah u shaqeeyaa?
Muxuu yahay xukunkaagu ee ku saabsan iibsashada Apple Watch ama Android Wear inaad ku xidho iPhone?
Jawaab Federico Iglesia
Waad salaaman tahay Federico. Haysashada Apple Watch, xitaa ha ka fikirin iibsashada Android Wear. Xaaladda ugu fiican (ee aysan sameyn doonin), waxay lahaan doontaa codsiyo isku mid ah, laakiin isku xirnaanta ka sii xun ee iPhone maxaa yeelay way xaddidnaan doontaa.
Haddii aad ka walaacsan tahay qiimaha, waxaan u maleynayaa in saacadahan aysan wax badan ka jaban doonin, sidaa darteed waxaan u maleynayaa inay u qalanto in la sii hayo midka ugu fiican ee ku habboon iPhone-kaaga, isticmaal waxaad isticmaasho oo aad fursad u leedahay inaad waxyaabo badan oo dheeraad ah isticmaasho.
AT&T "waxay dishaa" asalka iPhone-ka (2007) shabakadiisa moobaylka
7 Ciyaaraha iyo codsiyada bilaashka ah wakhti xaddidan (Janaayo 18)